Bell Sanchar बेलायतमा भिसी थापाको सालिक अनावरण - Bell Sanchar
ग्रेटर रसमोर नेपलिज कम्युनिटीका नेतृत्वमा नेपाली तथा विदेशीबाट चन्दा सङ्कलन गरी सालिक बनाइएको हो ।
लण्डन, १० असोज
बेलायती सेनामा भिक्टोरिया क्रस ९ भिसी० पाउने पहिलो गोर्खा सैनिक कुलवीर थापामगरको सालिक अनावरण गरिएको छ । अल्डरसटस्थित प्रिन्सेस गार्डेनमा बनाइएको सालिक बौद्ध र हिन्दू परम्पराअनुसार पूजापाठ गरेपछि शनिबार अनावरण गरिएको हो ।
सो समारोहमा बेलायती रक्षा तथा भेट्रान्स राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, ह्याम्पसायर काउन्टीका डेपुटी लर्ड लेफ्टिनेन्ट मणिकुमार राई, बेलायती सेनाका कमाण्डर होम कमाण्ड एण्ड स्ट्याण्डिङ जोइन्ट कमाण्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल इयान केभ सिबी, दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाललगायतले सालिक अनावरण गर्नुभएको थियो । समारोहमा दिवङ्गत सेनाका सम्झनामा मौनधारण गरिएको थियो ।
ग्रेटर रसमोर नेपलिज कम्युनिटीका नेतृत्वमा नेपाली तथा विदेशीबाट चन्दा सङ्कलन गरी सालिक बनाइएको हो । रसमोर बरो काउन्सिलले इजाजत दिएपछि गत फेब्रुअरी २०१९ मा परियोजना प्रारम्भ भए पनि कोभिड महामारीले केही समय लम्बिएको थियो । सालिक बनाउन एक लाख ७० हजार पाउण्ड बढी खर्च भएको परियोजना अधिकृत ग्यारी घलेकले जानकारीदिनुभयो ।
काउन्सिलले वर्षेनी एक पाउण्डमा ९९ वर्षको लागि सालिक बनाउन जग्गा भाडा दिएको थियो भने सालिक मर्मतसम्भार पनि काउन्सिलले नै गर्ने जनाइएको छ । अल्डरसटमा स्थानीय समुदायसँग नेपालीको सुमधुर सम्बन्धको प्रमाणका रूपमा सालिक अनावरण भएको वेलिङटन काउन्सिलर जीव बेल्वासेले बताउनुभयो ।
# बेलायती सेना
# भिक्टोरिया क्रस ९ भिसी०
हत्या आरोप लागेका १२ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान
थप ४३ मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
कर्णाली प्रदेशको बजेटमाथिको छलफल जारी
१.	पूर्व गाउँपालिका अध्यक्षको दादागिरीः कार्यकक्षमै वडाध्यक्षमाथि हातपात
२.	पैसा नहुँदैमा मनास्लु कलेज पढ्न नपाउने भन्ने हुँदैन– प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ
३.	छानबिन कार्यदलमा एकराजले भने- राज्यमन्त्री वलीसँग साढे ६ लाख लिएको थिएँ
४.	जग्गाधनीको नक्कली मृत्युदर्ता बनाएर ११ आना जग्गा बिक्री
५.	पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि
६.	एमाले सांसद बानियाँविरुद्ध बाँके प्रहरीमा थप उजुरी
७.	ट्रयाक खोलेको २८ वर्षपछि सडक कालोपत्र
९.	समाजसेवामा सामाजिक सङ्घसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण छ ः मन्त्रीपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष रेग्मी
१०.	दाइ हरिशरणले घोषणा गरे स्वतन्त्रहरूको अलाइन्स रवि लामिछानेलाई उछिनेर